Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံထုတ် CoronaVac ကာကွယ်ဆေးက အလွန်ထိရောက်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့ဟု ချီလီတာဝန်ရှိသူ ပြောကြား
ချီလီ ကာကွယ်ဆေး ကပ်ရောဂါ
သိပ္ပံ ၊ နည်းပညာ ၊ ဗဟုသုတ နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဝန်ကြီး Andres Couve က ချီလီနိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေး ၈ ကြိမ်မြောက် တင်ပို့မှုအား လက်ခံရရှိချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ချီလီအစိုးရက ဧပြီ ၁၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာများအား ကာကွယ်တားဆီးရာတွင် CoronaVac ကာကွယ်ဆေးသည် ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်မှု ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ချီလီနိုင်ငံ ဆန်တီယေဂိုမြို့၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရန် ပြင်ဆင်နေမှုအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါလေ့လာချက်တွင် ယင်းကာကွယ်ဆေးသည် ဆေးရုံတက်ရခြင်းကို ကာကွယ်ရာတွင် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထိရောက်မှုရှိကြောင်း ၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုသို့ ရောက်ရှိခြင်းကို ကာကွယ်ရာတွင် ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထိရောက်ကြောင်း နှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးမှုများအား ကာကွယ်ရာတွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ချီလီနိုင်ငံ ဆန်တီယေဂိုမြို့၌ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးက တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinovac ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ချီလီနိုင်ငံ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ပြည်သူလူထုအား ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ချီလီနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ ချီလီနိုင်ငံ၌ ဆေးနှစ်ကြိမ် ထိုးနှံပြီးသူ ၅ ဒသမ ၂ သန်း နှင့်အတူ ပြည်သူ ၇ ဒသမ ၆ သန်းကျော်မှာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချီလီနိုင်ငံ၌ ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် COVID-19 လူနာပေါင်း ၁,၁၂၄,၇၁၈ ဦး နှင့်အတူ သေဆုံးသူ ၂၅,၁၇၇ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ချီလီနိုင်ငံ၌ COVID-19 လူနာ များပြားလာခြင်းအား ရက်သတ္တပတ်များစွာ ကြုံတွေ့နေရသည်။ Santiago Metropolitan ဒေသတစ်ခုလုံး အပါအဝင် ချီလီ လူဦးရေအများစုသည် ယခုအခါ ကပ်ရောဂါ ပြန့်နှံ့မှုအား ထိန်းချုပ်ရန် Quarantine အစီအစဉ်အောက်တွင် ရှိနေပြီး အစိုးရက နယ်စပ်များအား ပိတ်ရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Chile has been facing an increase in COVID-19 cases for several weeks. A large part of the Chilean population, including those in the entire Santiago Metropolitan Region, is now under quarantine to curb the spread of the disease, and the government has ordered the closure of the borders. Enditem
Previous Article Sinovac ကာကွယ်ဆေးက COVID-19 နှင့်ဆက်စပ်သော သေဆုံးမှုကို ကာကွယ်ရာတွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်မှုရှိ
Next Article ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ သန်းကျော်ရှိလာ